समाचार – Annapurna Daily
धनगढीबाट बझाङतर्फ गइरहेको ना६ख १८३१ नंको यात्रुबाहक बस डडेल्धुराको साउखर्क नजिक आज बिहान ५.३० बजे दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनाको कारण क्षमता भन्दा बढी यात्रु भएको प्रारम्भिक जानकारीबाट खुल्न आएको छ । बसमा खाद्य सामग्री र व्यापारिक प्रयोजनका सामग्रीहरु बढी हुनु तथा यात्रु पनि क्षमताभन्दा बढी भएका […]
दैलेखमा अघि बढ्यो पेट्रोलियम उत्खननको काम !
दैलेखको पादुका क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानीको बिस्तृत अध्ययनका लागि चिनिया टोली नेपाल आउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम खानी उत्खननको बिस्तृत अध्ययनका लागि आगामी मे महिनाको मध्यतिर चिनिया टोली नेपाल आउन लागेको हो । संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दीको सामना गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पेट्रोलियम खानीको उत्खनन गर्ने काम […]
कसले राख्यो पशुपतिमा चारलाख प्रतिबन्धित भारु ?
काठमाडौं – पुशपतिको पूजा र भेटीबाट आउने आम्दानी निरन्तर बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पूजा र भेटीबाट १३ करोड रुपियाँ हाराहारी सङ्कलन भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा अझ बढ्ने अनुमान छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका उपनिर्देशक प्रेमहरि ढुङ्गेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा आठ करोड ८७ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। भेटीबाट दुई करोड ५७ […]
संगीतकार मदन दीपबिमको निधन !
चर्चित गायक मदन दीपबिमको निधन भएको छ । अमेरिकामा छोरी ममतासँग बस्दै आएका गायक तथा संगीतकार मदन दीपबिमको सोमबार राती निधन भएको हो । उनको हृदयघातका कारण अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा निधन भएको बताइएको छ । गायिका शिवा बस्नेतसँग विवाह गरेका मदन दीपबिमलाइ गएको महिना हृदयघात भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।उनको उहाँको के भूल भयो […]
बृद्धाश्रममा भेटिईन् कुनै समय राजा महेन्द्रको गाडी चलाउने ड्राईभर्नी आमा (भिडियो) !
काठमाडौं (शिशिर भण्डारी) जिन्दगीमा मरेर लानु केहि रहेनछ, जस्तो आयो त्यस्तै जानुपर्ने रहेछ । यो मेरो होईन १०१ बर्षकी आमा रामदेवी श्रेष्ठको भोगाई हो । बि.सं १९७५ सालमा काठमाडौंमा जन्मनु भएकी आमा रामदेवी श्रेष्ठ सबैले राजको डाईभर्नी भनेर चिन्दछन् । तत्कालिन समयमा राजा महेन्द्रको गाडी चलाउने भएका कारण आमाले यो उपमा पाउनु भएको हो । […]
निर्माण गरेको साता नपुग्दै कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रियो !
निर्माण गरेको साता नपुग्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित सद्भावना मार्गको कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएको छ । उपमहानगरले बनाएको सडकको दुवै किनारातिर कालोपत्रेमै घाँस उम्रिएको हो । कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएपछि त्यसको गुणस्तरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएको छ । आयोगको कञ्चनपुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको टोलीले कालोपत्रे गरिएको सडकको निरीक्षण गर्नुका साथै धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सडकसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । […]